Gurmadka Cimilada iyo Dhaqaalaha Hadda ee Soo -kabashada Dalxiiska Cagaaran
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Gurmadka Cimilada iyo Dhaqaalaha Hadda ee Soo -kabashada Dalxiiska Cagaaran
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Waajib ah • Wararka Seychelles • Dalxiiska
Dood -cilmiyeedka dalxiiska cagaaran ee Seychelles
Daneeyayaasha dhammaan qaybaha dalxiiska iyo bulshada rayidka ah ayaa isugu yimid Hotel Eden Bleu oo loogu talagalay Soo -kabashada Cagaaran ee Dood Cilmiyeedka Dalxiiska Khamiista, Sebtember 23, si loo muujiyo xaaladda degdegga ah ee cimilada iyo lama huraanka dhaqaale ee soo kabashada cagaaran ee dalxiiska.
Waxaa jira hindise iskaashi oo ka dhexeeya Waaxda Dalxiiska ee Seychelles, Wasaaradda Beeraha, Isbeddelka Cimilada iyo Deegaanka (MACCE), iyo Guddiga Sare ee Ingiriiska.
Dood -cilmiyeed ayaa looga hadlayaa u nuglaanshaha dalxiiska ee sii kordhaya ee saameynta isbedelka cimilada.
Iyada oo si weyn loogu tiirsan yahay dalxiiska, arrimahani waxay matalaan khatar weyn oo xagga dhaqaalaha ah.
Hindisahan iskaashi ee u dhexeeya Waaxda Dalxiiska ee Seychelles, Wasaaradda Beeraha, Isbeddelka Cimilada iyo Deegaanka (MACCE), iyo Guddiga Sare ee Ingiriiska, ayaa aqoonsaday baylahda sii kordhaysa ee dalxiiska ee saamaynta isbeddelka cimilada. Dood-cilmiyeedka ayaa sidoo kale lagu aqoonsaday u nuglaanta waaxda ee saadaasha muddada-dheer ee hoos u dhaca safarka muddada dheer ee socdaalayaasha caalamiga ah, taas oo ay ugu wacan tahay walaaca sii kordhaya ee saameynta kaarboon ee duullimaadyada. Iyada oo si weyn loogu tiirsan yahay dalxiiska, arrimahani waxay matalaan khatar weyn oo ku wajahan dhaqaalaha dalka.
Daneeyayaasha labada qaybood ee gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ahba waxay wadaageen qalabkii jiray iyo dhaqamadii ugu fiicnaa ee hadda jira gacan ka geysanaya la -qabsiga cimilada iyo dadaallada yareynta gudaha warshadaha dalxiiska, si loo dhiiri geliyo ganacsiyada dalxiiska oo badan si ay uga qayb qaataan horumar waara oo si firfircoon u taageera dadaallada ilaalinta. Kuwaas waxaa ka mid ah summadaha shahaadeynta waarta ee la aqoonsan yahay, qashinka caqliga leh iyo mas'uuliyadda leh, nidaamyada maareynta biyaha iyo tamarta ee loo adeegsado xarumaha, u roga xalalka ku saleysan dabeecadda shirkadaha ku saleysan dabeecadda, iyo isku xirka dhowridda dalxiiska dalxiiska iyo horumarinta suuqgeynta.
Hadalkii uu ka jeediyay dood -cilmiyeedka, Wasiir Radegonde wuxuu xusay in dhacdooyinkii labadii sano ee la soo dhaafay ay ina tuseen sida dhaqsaha leh ee dunidu isu beddelayso iyo sida dalxiiska ugu nugul yahay arrimo dibadeed, gaar ahaan waddan jasiirad yar ah.
“Waxaan sidoo kale markhaati u nahay kor u kaca socdaalka aadka u baraarugsan deegaanka, kaasoo sii kordhaya rajaynaya meelaha loo dalxiis tago inay bixiyaan fursado dalxiis oo waara. Tusaale ahaan, cilmi -baaristu waxay muujineysaa in tirada sii kordheysa ee dadka ay qorsheynayaan inay duulimaadyo yar ku sameeyaan fasaxyadooda si loo xaddido qiiqa CO2 ee hawada iyo raadkooda kaarboon. Intaa waxaa dheer, dadka u ololeeya cimilada, waxay bilaabeen olole dagaal “ceebeyn duulimaad” ah oo ka socda daafaha dunida, gaar ahaan Yurub, iyagoo niyad-jabinaya duulimaadyada dhaadheer. Dhaqdhaqaaqyadan ayaa u muuqda kuwo soo jiitamaaya. Iyaguna si fiican ugama hadlaan warshadeena dalxiiska. Waxaan ku jirnaa meel isgoys ah oo ay tahay inaan si xikmad leh u dooranno mustaqbal waara iyo, gaar ahaan, xalalka ku saleysan dabeecadda oo ah ku mashquulinta ugu horreysa COP 26, ”ayuu yiri Wasiir Radegonde.
Dood -cilmiyeedka ayaa sidoo kale noqday fursad lagu iftiimiyo Seychelles'Dib -u -eegis lagu sameeyey Ka -qayb -qaadashadda Qaran -go'an (NDCs) - iyada oo diiradda la saarayo ballanqaadyada dalxiiska ee qaranka - si loogu wargeliyo daneeyayaasha dalxiiska muhiimadda muhiimka ah ee waaxda si loo gaaro himilooyinkaas shanta ilaa tobanka sano ee soo socota.
Dood -wadaag ku saabsan mawduuca “Soo -kabashada Cagaaran ee Dalxiiska; Yoolalka, Fursadaha iyo Baahiyaha ”ayaa iyaguna dhacay galabtii. Ka -qaybgalayaashu waxay ka doodeen baaxadda shaqo iyo fursadaha ganacsi ee soo -kabashada dalxiiska cagaaran ay u keeni karto bulshooyinka maxalliga ah; baahida dib -u -soo -kabashada oo loo dhan yahay iyadoo la tixgelinayo baahiyaha iyo caqabadaha dhammaan daneeyayaasha dalxiiska; sida soo kabashada cagaaran ay ugu biiriso Dhaqaalaha Buluugga ah ee Seychelles, iyo sida dalxiiska dabeecadda ku saleysan uu u heli karo maaliyad barnaamijyada ilaalinta muddada-dheer inta lagu jiro xiisadaha warshadaha dalxiiska, sida lagu muujiyey faafitaanka socda ee COVID-19 masiibada adduunka.
Ka -qaybgalayaashu waxay sidoo kale dib u milicsadeen baahiyaha loo baahan yahay si loo gaaro Soo -kabashada Cagaaran ee Dalxiiska - iyo la -qabsiga cimilada iyo bartilmaameedyada yareynta - taas oo qayb ka ah soo -saaridda dukumintiga natiijada. Dukumentigan gaaban wuxuu ka tarjumayaa ujeeddada dood -cilmiyeedka, wuxuuna si kooban u soo koobayaa doodaha iyo milicsiga la sameeyey intii ay dhacdadu socotay. Dukumentiga ayaa sidoo kale muujinaya ballan-qaad gaaban oo ku saleysan NDC iyo dalxiiska diiradda saaraya-oo loo adeegsan doono meel tixraac ah oo looga tashanayo mustaqbalka-kaas oo ka-qaybgalayaasha lagu casuumi doono inay saxiixaan.
Muhiimad ahaan, waxaa jiray ka -qaybgalayaashu isku -raac aad u weyn oo ku aaddanaa in Seychelles si wanaagsan loo meeleeyay si ay ula jaanqaaddo isbeddelka dabeecadaha macaamilka ee socdaalka caalamiga ah iyo inay noqoto hoggaamiye caalami ah dalxiiska waara - oo la dhihi karo way ka badan tahay meelaha kale. Dalxiiska Dib -u -soo -kabashada Cagaaran ee Seychelles, sida uu soo jeediyay Dood -cilmiyeedkan, ayaa markaa u beddeli doonta khatar dhaqaale oo weyn, fursad dhaqaale oo muddo dheer ah.